Ruushku mid cusub ayuu ku daray tillaabooyinka coronovirus. Iyadoo la raacayo Madaxweyne Putin "Ha la qaado dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah", dowladda Ruushka waxay go’aansatay inay si ku meel gaar ah u xirto xadka tareenka ee ay la leedahay Shiinaha. Raiisel wasaare ku xigeenka Tatyana Golikova, Shiinaha [More ...]
Turkey iyo Iran in ay ku sugan ugu sareeya 10 dal ugu soo booqday ee Bariga Dhexe ma aha mid la yaab leh. Waa maxay sababta? Sababta ugu weyn ayaa ah aragtida weyn ee labada dal. Qof walba iyo Kabbadokiya, iyo Pamukkale ee Turkey ama [More ...]
Russia gudaheeda, mid cusub ayaa lagu soo daray shaqooyinka waaweyn ee shirkadaha dhismooyinka Turkiga saxiixi doonaan. Sawirkii ugu horreeyay ayaa lagu dhuftay mashruuca dhismaha, kaasoo muddo dheer ka shaqeynayay, ku dhawaad ​​nus bilyan doolar. Shirkadda Turkiga ee loo yaqaan Limak, oo la shaqeysa [More ...]
Booqashada Kappadocia waxay la mid tahay booqashada goob kale. Runtii nasiib ayaan u leenahay inaan waddankan oo kale meel aan caadi ahayn ku lahayn. Halkan waxaad ku lugayn kartaa magaalooyinka dhulka hoostiisa ku yaal, sawirro aan caadi ahayn ka dhex qaad dhagaxyada dhagaxyada, [More ...]
Mid ka mid ah magaalooyinka ugu isugu in Iran ka Turkey si ay u safri Tabriz, oo waa ka fudud ka badan waad qiyaasi kartaa. Waxaad ka qaadan kartaa tareenka Tabriz una taga magaalooyin badan oo waaweyn oo Turki ah sida Istanbul, Ankara, Kayseri iyo Izmir. TransAsia [More ...]
213 gaari oo kuwa dagaalka ah oo laga soo saaray dalka Iran ayaa la galiyay xaflad. Madaxweynaha Jamhuriyadda Islaamiga ee Railways Railways (RAI), Saied Rasouli, wuxuu sheegay in tirada gawaarida gaashaaman iyo gantaallada laga soo saaray dalka la saxeexay miisaaniyaddii sanadkii la soo dhaafay. [More ...]